Ra’iisul wasaare ku xigeenka Turkiga oo Muqdisho yimid(Sawirro) | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ra’iisul wasaare ku xigeenka Turkiga oo Muqdisho yimid(Sawirro)
Ra’iisul wasaare ku xigeenka Turkiga oo Muqdisho yimid(Sawirro)
Wefdi uu hoggaaminayo Ra’iisul wasaare ku xigeenka dalka Turkiga, ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho, iyadoo ay ku soo dhoweyeen masuuliyiin uu horkacayey Ra’iisul wasaare ku xigeenka Xukuumadda Soomaaliya.
Turkiga Vyesi Kaynak Ra’iisul wasaare ku xigeeka dalka, Turkiga garoonka Muqdisho waxaa ku soo dhoweeye, mudane Mahdi Axmed Guuleed, Wasiirka Arrimaha Dibedda Yuusuf Gaaraad Cumar iyo diblomaasiyiin isugu jirta Soomaaliya iyo Turkiga.
Turkiga Vyesi Kaynak Ra’iisul wasaare ku xigeenka, ayaa u kuurgeli doona xaaladaha abaaraha iyo sidii dowladda Turkiga ay sii xoojin lahayd dedaalkeeda ku aaddan gurmadka abaaraha Soomaaliya ka taagan.
waxaa la filayaa in masuuliyiinta sare ee dalka uu la kulmo wefdigaasi ballaaran ee Turkiga ka socda.
Previous articleRa’iisal Wasaare Kheyre oo ka tacsiyadeeyey Geeridii Wasiir Nuur Faarax oo xalay ku geeriyooday Muqdisho
Next articleRa’iisul Wasaare ku-xigeenka Turkiga oo soo gaaray Muqdisho